Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Jolay 2019 à 14:58
Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Mey 2019 à 09:41 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 26 Jolay 2019 à 14:58 (hanova) (esory)
Ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan'ny Kristiana malagasy tsy katolika dia manao hoe ''Epistily ho an'ny Kolosiana'' (hafohezina amin'y hoe ''Kolosiana'') fa ny Katolika malagasy kosa manao azy hoe ''Epistolà'' na ''Taratasin'i Masindahy Paoly'' ''ho an'ny Kôlôsianina'' (hafohezina amin'ny hoe ''Kôlôsianina'').
== FanintinanaFamintinana ==
Tsy i Paoly no nanorina ny fiangonana tao Kolosia fa i Epafrasy izay nitory ny vaovao mahafaly tao (Kol. 1.7). Eny am-panombohana ny taratasiny i Paoly dia miarahaba ny mpamaky azy sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary mivavaka (1.1-11). Soritsoritany mazava ny amin’i [[Jesosy|Kristy]] sy ny asa fanavotana nataony ka ilazany fa amin’ny firaisana amin’i Kristy ihany no misy ny fahasambarana fa tsy araka izay lazain’ireo mpampianatra mandainga (Kol. 1.12-23 ; 2.6-19). Lazalazain’i Paoly koa ny ady atrehiny hampandrosoana ny fitoriana ny vaovao mahafaly tamin’ireo Kristiana kolosiana sy laodikeana (Kol. 1.24 – 2.5).
Mampitandrina mialoha ny Kristiana ao [[Kolosia]] i Paoly mba tsy ho voataonan’ny fampianarana mifanohitra amin’ny fampianaran'i Kristy. Izany fampianarana tsy izy izany dia manankina ny famonjena amin’ny fahalalana izay fantatra taty aoriana amin'ny anarana hoe [[gnostisisma]]. Ny Fiangonana dia vatan’i Kristy, hoy i Paoly (Kol. 1.15-20). Ampahatsiahivin’ny Paoly ny fototra iorenan’ny Vaovao Mahafaly na Filazantsara. Izany fampianara-diso izany dia ny fampianaran’ny filozofa (Kol. 2.8) izay mampifangaro finoana isan-karazany amin’ny [[fivavahana jiosy]] (toy ny fivavahana amin’ny [[anjely]] sy ny tsy maintsy hanatanterahana famoràna) izay miendrika fampijalian-tena hahazoana famonjena (Kol. 2.20-23).
Mananatra ny Kristiana mba tsy hino afa-tsy an'i Kristy voahombo tamin’ny hazofijaliana sy nitsangan-ko velona i Paoly. Ny finoana an’i Kristy, hoy i Paoly, no manafaka amin’ny fahendren’izao tontolo izao izay tsy marina sy amin’ny fitandremana ny Lalàna. Manambara i Paoly fa ny fiainana kristiana dia fiainan’ny olona afaka (Kol. 2.20-3.5) sady anjakan’ny fitiavana sy ny fiadanana (Kol. 3.6-17) izay tsapa eo amin’ny fianan’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina (Kol. 3.18-4.6).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/972696"